OpenStreetMap, oo taageeraya kuwa qurxoon. | Laga soo bilaabo Linux
OpenStreetMap, oo taageeraya kuwa qurxoon.
nano | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias, Kuwa kale
Intaan oo dhan waan xiiseynayay OpenStreetMap maantana waxay ahayd inaan bilaabay inaan si qoto dheer u baaro, si toos ah taleefanka gacanta una arko waxaas oo dhan waxay ku saabsanaayeen. Horey ayaa loo ogaa inay tahay barxad sawir gacmeed ah oo qofkasta uu tafatiri karo khariidadaha iyo keydkooda si loo abuuro khariidad weyn oo khadka tooska ah ee internetka ah oo ay ka buuxaan macluumaad, tan kore, dabcan.
Mashruucan oo dhami waa mid xiiso leh maxaa yeelay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u habeyso khariidadahaaga, ma ahan macnaha ah "Oh, waxaan haystaa khariidad ii gaar ah" laakiin macno ahaan inaan garaacno oo aan tafatirno khariidadaha si aan u kobcino macluumaadka ku dhex jira.
Quruxdeeda dhamaanteed ayaa ah, sida magaceeda la yiraahdo, waa bilaash, tan ugu quruxda badanina waa in, si ka duwan xaaladaha qaar, mashruucan uu yahay tartan dhab ah oo ay ka baqaan jilaayaasha waa weyn ee arimahan maxaa yeelay waxaa la cadeeyay in Tayada OSM waxay la mid tahay ama ka fiican tahay dhiggeeda maadaama aysan tifaftireynin xoogaa shaqaale ah ama aysan ku taageerin miisaaniyado waa weyn, laakiin ay keeneen tabarucaad yar oo ka imanaya kumanaan kun oo dad ah oo adduunka ku nool, kuwaas oo wata GPS ama Smartphone ay ku sawiri karaan wax kasta, goobo faahfaahsan oo weyneeya xogta iyo tan (tani waa mid aad muhiim u ah) OSM wuxuu leeyahay baaxad dheeri ah isla isla arintaas ... dad badan oo ku socdaalaya gaadiid kala duwan, goobo iyo waqtiyo ayaa soo saaraya macluumaad dheeri ah.
Hadda, waxaan tan kala hadlay saaxiib u dhinta-adag oo xagjir ah oo ka mid ah Adeegyada Google iyo Apple (Sidee xaq u leh wax soo saar?) yaa ila dagaallama ilig iyo musbaar aan u baahnayn OSM inuu horey u lahaa Khariidadaha Google ...
Kaalay, okay, kulligeen xor baan u nahay inaan dooranno waxa aan dooneyno aniguna waan doortaa galaya sababahayga gaarka ah, laakiin waxay waydiisay su'aal ay si fiican uga jawaabaan -Leaks ee mashruuca (afka isbaanishka, dhanka kale) su'aashu waxay ahayd Waa maxay sababta OSM?
Waa maxay sababta OpenStreetMap?
Meelo badan oo adduunka ah, sida Isbaanishka, xogta juqraafiyeed ee dadweynaha (geodata) si xor ah looma isticmaali karo. Guud ahaan, dalalkan, hawsha fulinta sahaminta macluumaadka noocan ah waxaa loo wakiishay hay'ado kala duwan oo dowladda ku tiirsan (sida IGN-ka Spain) taas oo iyaduna ka iibisa sawir gacmeedkan dadka adiga oo kale ah, iyadoo faa'iido laga helayo waa Haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah waddamadaas waxaad laba jeer ku bixineysaa macluumaadkaas dadweynaha. Midka koowaad marka la soo saarayo, iyada oo loo marayo canshuurahaaga, iyo tan labaad markii la helayo nuqul ka mid ah.
Wadamada sida Mareykanka, xogta kaartuuga ah (aan la daaweyn) ee ay leedahay dowladda, sida feylasha TIGER, waxay ku yaalliin barta dadweynaha, hase yeeshe kuwa wax laga beddelay iyo kuwa la saxay guud ahaan waxay leeyihiin xuquuq ay ku ganacsan karaan iyaga .
Waxyaabaha ay soo saaraan ururadan ee bixiya macluumaadka juqraafi iyo kaartografi ahaan waxaa ku jira mararka qaarkood xog khaldan, waxa loogu yeero Ukunta Easter, si ay awood ugu yeeshaan inay ogaadaan una soo bandhigaan kuwa qaatay nuqul iyaga ka mid ah iyagoon wax fasax ah ka haysan. Khayaanada noocan ahi waxay ka muuqataa khariidado qaab ah waxyaabo aan jirin, magacyada meelaha khayaaliga ah, calaamadaha dhijitaalka ah, ama qodobbada xakamaynta oo aad u yar, kuwaas oo aanu ku arki karin isha qaawan qofka la tashanaya (ama nuqul ka qaadanaya) laakiin ay si fudud u heli karaan kuwa tababbaray si loo raadiyo. Haddii aad sameysid khariidad adoo adeegsanaya xogtaan aasaas ahaan, waxaa laga yaabaa inaad koobiyeyso mid ka mid ah ukuntahan Easter iyada oo aan la ogeyn oo aan la ogaan isticmaalkeeda khiyaanada ah. Sidoo kale, khariidada aad iibsatay waxaa laga yaabaa inay khalad tahay xaqiiqda ah inaad iibsatay sanad ka hor oo hadda wadooyin cusub la furay, ama si fudud maadaama xog uruurinta ay qaldan tahay.
Haddii aad wali aqbasho ereyadan oo dhan meelo badan ma awoodi doontid inaad wax ka qabato wax ka badan xuquuqda isticmaalka xaddidan ee sawir gacmeedkaas. Tusaale ahaan, ma saxi kartid magaca dariiqa, kuma dari kartid POIs cusub, ama uma isticmaali kartid xogta barnaamijka kumbuyuutarka adigoon qiimo qaali ah ku bixinayn. Lacag aad uga badan intaad haysato. Ka waran haddii aad rabto inaad u dirto saaxiib, boostada ugu dir khariidada oo ay la socoto casuumaad, ama ku dhejiso sabuuradda ogeysiiska? Qaar badan oo ka mid ah adeegsigan ayaa ka sharci yar sida aad u maleynaysid.
Horumarka tikniyoolajiyadda ayaa noo oggolaaday inaan helno aalado GPS rakhiis ah oo kuu oggolaanaya inaad sameysato khariidado kuu gaar ah adiga oo kaashanaya isticmaaleyaal kale oo badan iyadoon xogtan lahayn mid ka mid ah xaddidaadaha aan soo sheegnay. Suurtagalnimada inaad fuliso waxay kuu oggolaaneysaa inaad adduunka u ogeysiiso meesha aad ku nooshahay. Haddii uusan khariidad ka jirin lama ogaanayo!
Maxaanan ugu isticmaali waayey Khariidadaha Google xogtayda?
Sababtoo ah xogta waxaa lagu ilaaliyaa xuquuqda lahaanshaha iyo xuquuqda lahaanshaha ee hay'adaha sida National Geographic Institute ama kuwa kale. Google / qofkasta ayaa leh liisankaaga. Haddii aan isticmaalno, waa inaan iska bixino.
Waa arrin xorriyadda, ee ma aha qiimo. Si aad u fahamto fikradda, waa inaad uga fikirtaa bilaashka "xorriyadda hadalka", oo aanad u noqon "biir bilaash ah."
Khariidadaha Khariidadaha Google waa bilaash sida "biirka", maaha sida "muujinta".
Yahoo iyo Bing labaduba waxay heshiis la gaareen OpenStreetMap si loogu oggolaado isticmaalka sawirradooda hawada.
Haddii baahiyaha mashruucaaga sawir gacmeed aysan u baahnayn wax ka badan Khariidadaha Google API, hambalyo. Laakiin taasi run maahan dhammaan mashaariicda. Waxaan u baahanahay xog bilaash ah oo u oggolaaneysa barnaamijyada, u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo sawir qaadayaasha inay la kulmaan baahidooda iyadoon la xaddidin, midkoodna Google API ama Shuruudaha Adeegsiga.
Waqtigan xaadirka ah, jawaabta caadiga ah waa 'Maxaa diidaya oo kaliya in dadku khariidad toos ah ugu dhigaan khariidada Google, ka dibna kaydi iskudhafka latitude iyo longitude ee keydka xogta OpenStreetMap? Taasi waa bilaash, sax? ».
Nasiib daro Maya. Xogta loo adeegsaday khariidadaha Google waxaa laga helay NAVTEQ iyo Tele Atlas, oo ah laba shirkadood oo khariidaynta waaweyn ah. Iyaga, ayaga, waxay xogtaan ka heleen wakaaladaha khariidaynta qaranka (sida IGN). Shirkadahani waxay maalgashi ku sameeyeen dhowr milyan oo Yuuro si ay u ururiyaan xogtan, sidaa darteed waxay si macquul ah u rabaan inay ilaaliyaan xuquuqdooda xuquuqdooda
Haddii aad ka soo ururiso xogta Khariidadaha Google waxaad abuureysaa "shaqo derivative ah". Mid kasta oo ka mid ah xogtan la soo saaray wuxuu hayaa shuruudaha xuquuqda lahaanshaha ee liisanka asalka ah. Ficil ahaan tani waxay ka dhigan tahay in xogtaadu ay ku xiran tahay xuquuqda shatiga iyo xaddidaadaha qandaraas ee bixiyeyaashaan khariidaynta. Taasi waa dhab ahaan waxa OpenStreetMap uu isku dayayo inuu ka fogaado.
Fadlan yaan lagu kadsoominin barnaamijka softiweerka ah ama tixgelinta isticmaalka. Khariidadaha Google API waxaa lagu dari karaa mashaariicda laga helo ilaha furan, hubaal. Laakiin tani kaliya waxay nidaamineysaa habka aad u isticmaasho softiweerka, wax macno ah kuma lahan xogta ay soo bandhigtay API-kan, oo wali leh xuquuqdiisa.
(Ma cadda wali haddii loo oggol yahay in laga abuuro shaqo laga soo qaaday sawir dusha sare leh: akhrinta qaar ka mid ah sharciga Isbaanishku waxay soo jeedinayaan inaad taas sameyn karto adigoon 'dhaxalsiin' xuquuqda lahaanshaha sawirka. u fur wadooyin cusub OpenStreetMap iyo mashaariic la mid ah, laakiin maqnaanshaha go'aanka noocan oo kale ah, waxaan sii wadeynaa inaan adeegsanno kaliya ilahayaga, 100% xogta bilaashka ah.)
Hadda, in kasta oo waxaas oo dhan si wanaagsan loo sharraxay, waxaan u haystaa jawaabo u gaar ah waxan oo dhan ...
Marka hore waxaan isticmaalaa galaya maxaa yeelay waa bilaash, taasi waa in wax laga caddeeyo bilawga, laakiin in ka badan rabitaan xamaasad leh in la isticmaalo kaliya softiweer bilaash ah, wax aan aniga gebi ahaan aniga khusaynin; waa rabitaan tayo, iyo xaaladdan galaya ayaa si cad uga fog Khariidadaha Google si isku mid ah u saxan tahay laakiin wax badan loo sii hagaajin karo.
Qodob kale oo aad muhiim u ah ayaa ah, dhamaanteen sifiican ayaan u ognahay in Google basaasyo nagu sameeyo, yaanan ku dhicin ()Sida ay ku yiraahdaan dalkayga), waa run oo waan ognahay, oo waxaan siineynaa Google awood ay kula socoto oo aan ku ogaano, iyo waxyaabo kale, meelaha aan ku soo noqnoqno, meelaha aan ka shaqeyno iyo blah, blah ... waa hagaag, aniga iguma haboona Android halkaas oo aan ku naafadiyey dhammaan xulashooyinka Khariidadaha Google.
Arintu waa taas, kiiskeyga galaya Ma lahan khariidado aad u dhameystiran oo magaaladeyda ah, dhab ahaantii, waxay si dirqi ah u leedahay waddooyin iyo magaalooyin, laakiin ma laha goobo xiiso leh, waddooyinka gaadiidka dadweynaha ama wax uun, waa shiraac madhan, taas oo aan ka dhigayn wax khasaare ah laakiin wax aad u kala duwan; waxay kadhigeysaa fursada ugufiican ee aan si toos ah u dhiso khariidada magaaladeyda waxna aan ugu daro mashruucan
Sameynta sidaas waa mid aad u fudud, haddii aad leedahay a Android aniga oo kale ah, kaliya ka soo deg API-ga OSM, OSMand ee Suuqa Android Google Play iyo voila, waxaad horeyba uheysateen labadaba codsi aad dib ufiiriso DHAMMAAN Khariidadaha OSM iyo sidoo kale dhamaan aaladaha lagu abuuro jidadka, qodobada, sharaxaada, iwm. Sikastaba, waxkastoo aad ubaahantahay si aad ugu soo saarto macluumaadkaaga maxaliga ah raaxo iyo faahfaahin kadibna si toos ah ugula soo bax kaydinta xogta mashruuca, qurux badan ...
Hadaadan haysan a Android laakiin haddii qalab kasta oo GPS ah, ka dib u tag qaybta wiki ee mashruuca oo hubi sida aad u sameyn karto, wax walba waxay ku qoran yihiin Isbaanish waxayna si fiican u diiwaangashan yihiin.
Hada hadaadan haysan wax umuuqda a GPS ama taleefan casri ah, Maxay macno leedahay, wali waad iskaashankartaa adoo si toos ah ugu hagaajinaya khariidadaha magaaladaada bogga rasmiga ah ee mashruuca ama sameeya wixii ay kuugu sheegaan qaybta u heellan ee wiki mawduucaas gaarka ah ... Ma jiro dagaal ama cudurdaar, waad ka qayb geli kartaa waad ka qayb geli kartaa.
Aniga shaqsiyan, iyo inaan dhammeeyo, waxaan isku duba riday koox asxaabteyda ah si ay u bilaabaan inay si fiican u qoraan wax walba oo aan ku taageeri karno mashruuca oo dhan galaya iyo sidoo kale, ku raaxeeyso wakhti dheer gaariga dhexdiisa inta aan khariidaynta ama baaskiil wadno, ama xitaa cagaheena markaan dareemo sida ... Runtu waxay tahay, waxqabad wanaagsan oo usbuuc dhammaad ah, caafimaad leh, baashaal ah, kaas oo taageera mashruuc bilaash ah iyo ... DHAQANKA GEEK! XD
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » OpenStreetMap, oo taageeraya kuwa qurxoon.
Maaha inaad caqli yeesho laakiin kuwa isku mid ah ayaa ku qoran h.
Maaha inaad caqli yeesho laakiin 1 + 1 = 2
Waan ogahay laakiin waxaan ku qoray gelitaankaas 12-kii subaxnimo iyo tifaftiraha qoraalka HTML, ha i weydiinin wax kaamil ah
Haa dheh, marmarsiinyo hore hahahaha.
Eeg waxa aan kuu sheegayo ...
Haddii aadan rabin inaad caqli yeesho markaa ha faallo bixin, waxaan u qoraa si aad u fiican oo waxaan u imid inaan la kulmo faallooyinkaas ugu horreeya ...
Meelo badan oo adduunka ah, sida Spain, xogta juqraafiyeed ee dadweynaha (geodata) si xor ah looma isticmaali karo. "
wtf? dhab ah? Ma garanayo sida ay INEGI ugu daweyso xogtan Mexico, laakiin iyaga lacag ma looga bixiyaa? maya fuck hahahahahaha
Wax xiriir ah ma lahan, laakiin waxay i xasuusineysaa dadka waalan ee doonayay inay rukhsad u yeeshaan aagagga waqtiga hahaha xD
Laakiin waa maxay dameerku inuu doonayo inuu bixiyo (laba jeer) wixii macluumaad ah oo bilaash ah
Maqaal aad u xiiso badan. Hadday marar badan xogta shirkaduhu khaldan yihiin, aasaas ahaan goobaha yar yar, oo aan la beddeli karin sidoo kalena maahan inaan u shaqeeyo shirkad macaash samaynaysa.
Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in lagu saxo barnaamijyada sida OSM, maxaa yeelay dhammaanteen waan wada shaqeynaa dhammaanteenna waan ka faa'iideysanaa.
Ku jawaab Mivare
Haa, wax waliba waa wax aan caadi aheyn, laakiin kaliya fiiri khariidadaha OSM si aad u ogaato inay sanado fudud ka fog yihiin kuwa Khariidadaha Google. Aaggayga waxaa ku yaal magaalo-magaalo la dhisay in ka badan 12 sano ka hor oo aan wali muuqanin. Waan garaaci karaa shaqada iyaga cusbooneysiinteeda naftayda, laakiin noloshu way gaaban tahay Google-na horay ayuu howshaas noogu qabtay;).
Haddii aad diiddo inaad dhammaystirto adigu, waa inaadan ka cabanin inay yihiin kuwo aan dhammaystirnayn. Wax uun waa mashruuc furan oo iskaashi ah.
Marka waxaad u maleyneysaa inay fiicantahay inaad ka shaqeyso khariidadaha aaggaaga OSM ka dibna shirkadaha sida Apple ama Foursquare u yimaadaan inay uga faa'iideystaan ​​shaqadaada bilaash, sax?
In alla intii aad sameyso, waligeed awood uma yeelan doonto inay la tartanto Muuqaalka Wadada.
Ma haysto wado aan ku ogaado sida looga kala baxo meel ilaa meel kale, si aan u ogaado jadwalka gaadiidka, iwm, maxaa yeelay ima adeegayso, waxba kuma qabanayo khariidada oo keliya only.
Dabeecadaha noocaas ahna kaliya ma shaqeeyaan, waa wax fudud. Horeba mashruucan waxaa adeegsada shirkado waawayn sida tufaax ama fouraquare halka ay kuqorantahayna, sifiican ayaa loo diiwaan galiyay. Waxay ila tahay wax ila qumman in aysan waxtar kuu lahayn adiga, haa, iyo xitaa hiwaayad ahaan ...
Ma ku hagaagsan tahay Apple inay si iskeed ah u adeegsato khariidadaha OSM ee ay sameeyeen adeegsadayaashu isla markaana ka helaan jeex ka mid ah?
Muxuu yahay maqaal wanaagsan oo waliba doodo wanaagsan oo kusaabsan Maxay OpenStreetMap? Runtu waxay tahay waqti aan fogayn waxaan ka bilaabay OpenStreetMap-kan (Marble si sax ah) oo aniga waxay ila tahay adduun runtii xiiso leh. Waxay noqoneysaa mid xiiso leh sida mid waliba uga qayb qaadan karo badar ciid ah "adduunkan" barnaamij furan ama bilaash ah.
iyaga iyo qofkasta oo doonaya inuu adeegsado ... mise iyagu keligood? Horaan u idhi, hadaad rabto inaad isticmaasho khariidadaha google, waa hagaag, laakiin u kaalay inaad dhaleecayso oo aad qalloociso osm ama mashruuc kasta sababta oo ah adigu ma jeceshahay ... waa hagaag, maahan. Kama isticmaali karo waddada waddankeyga waddankeyga maxaa yeelay ma uusan ballaarin oo Khariidadaha halkan ku yaal waa wax aan ka badneyn osm ... waan ka xumahay
Waxaan si buuxda u taageersanahay Openstreetmap, aad ayey uga sareeysaa magaalooyinka ay khariidadaha Google kaliya dhigayaan 3 sadar waa kiiska wadankeyga, waxaan ula jeedaa Ecuador ... Waxaan sameyn doonaa tabaruceyda sida ugu macquulsan ... post aad u fiican nano ... Salaan ...
Salaan. Waxaan arkaa inaan ku daahay dooda OSM. Macluumaadka ku jira boostadan waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore ku daro Marble, macmiil kumbuyuutar ah oo u oggolaanaya la-tashiga OSM, wax la mid ah Google Earth. Kadibna waxaa jira barnaamijka Merkaartor, oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo qaybo ka mid ah khariidadaha isla markaana aad wax kaga beddesho kombiyuutarkaaga. Ugu dambeyntiina, Firefox OS waxaa ku jira qalab sidoo kale adeegsada macluumaadka OSM, waxaa lagu magacaabaa Khariidadaha Lantea waxaana laga heli karaa Suuqa. Waxaan rajeynayaa in macluumaadku faa iido kuu yahay.
La heli karo Debian Lenny 5.0.10 (OldStable)
Natiijooyinka sahaminta: 2012 waxaan iibsan doonaa ...